Mafampana indray i Toamasina: raikitra ny fandorana kodiarana, niditra an-tsehatra ny Emmo/Nat | NewsMada
Mafampana indray i Toamasina: raikitra ny fandorana kodiarana, niditra an-tsehatra ny Emmo/Nat
Tsy mbola milamina tanteraka. Raikitra indray ny hetsika sy korontana tao Toamasina, omaly. Niditra an-tsehatra nandrava izany ny eo anivon’ny Emmo/Nat, nandrava izany.
Mafampana ! Nitabataba sy niantsoantso tsy fanekena ny fitohizan’ny fihibohana miaraka amin’ny fandefasana mpitandro filaminana maherin’ny 200 aty an-toerana ireo andiana olona nivorivory tetsy Ankirihiry. Tonga hatramin’ny fandorana kodiarana izany. Tsy nitazam-potsiny anefa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana fa nandray andraikitra avy hatrany nandrava izany. Nilefa nandositra tany amin’ny Bazary may ireo andian-jatovo ireo nanao sakana. Nitohy hatrany amin’ny lalam-pasika ny fifanenjehan’ny Emmo/Nat niaraka amin’ny polisin’ny Fip ireo olona ireo. Tratra tamin’izany ny telo lahy ka nampanadiovana ny godirao, nandorana kodiarana. Tsy fantatra ny mety ho tohiny avy eo.
Misy mpanao politika ao ambadika…
Etsy an-daniny, niely ny feo fa misy ny mpanao politika mikononkononana ny hanakorontana. Mety ho ao ambadik’izao raharaha izao ve izany ? Eo koa ny tsy fahankasitrahana ny tsy nampidirana am-ponja an’ ilay profesora noho ny fiahiahiana azy ho tao ambadiky ny nahafaty ilay dokotera iray, herinandro vitsy lasa izay.
Tsiahivina fa tsy vao voalohany ny fidinana an-dalambe tahaka izao. Efa nanao hetsika fitakiana maromaro koa ny mpianatry ny oniversiten’i Barikadimy ary nandoro kodiarana koa. Efa nivaha anefa izany satria namaly ny fitakiana ny fanjakana.